paulina.joukov | Londoloza Isitimela
Umbhali: Paulina Zhukov
Ikhaya > Paulina Zhukov
Uma uhlela uhambo lwakho lokuqala oluya eYurophu, kunezinto ezimbalwa odinga ukuzazi ngamadolobha amahle kakhulu emhlabeni. sidizayine umhlahlandlela ophelele we 10 amaphutha wokuhamba okufanele uwagweme eYurophu. A trip to the…
Iholide lomndeni eYurophu lingaba mnandi kakhulu kubazali nezingane zeminyaka yonke uma uhlela kahle. IYurophu izwe lezinqaba namabhuloho, amapaki aluhlaza okotshani nezinqolobane lapho amantombazane nabafana abancane bengazenza amakhosazana futhi…
Imvelo YaseYurophu nezindawo zikhuthaze izindaba zezinganekwane. Amazwe amakhulu anekhaya lemizila yokuhamba izintaba emangalisayo eholela kwezinye zezimangaliso ezingavamile zomhlaba. Emihumeni Emangazayo eHungary, iGrand Canyon enamanzi oluluhlaza eFrance, izihlalo zobukhosi zeqhwa e-Austria, futhi…
Amapaki aluhlaza, ukuhamba ngezinyawo ezintabeni, futhi isimo sezulu esintofontofo siphelele ngokuzijabulisa ngaphandle. Amadolobha amakhulu aseYurophu anakho konke ngakho-ke ungazama yonke imisebenzi yangaphandle i-Europe okufanele inikele. Ukusuka ekubuyiseleni ngamabhayisekili e-Amsterdam kuya e-Munich, lezi 7 amadolobha amahle kakhulu…
Amazwe amakhulu aseYurophu awumsuka wezinganekwane eziningi nezinganekwane, imvelo emangalisa nemizana egcina izimfihlo zasendulo. Eduze kwamadolobha amakhulu asemkhathini noma agxunyekwe ngemuva kwezintaba ze-limestone, inani lemizana ebukekayo nenhle eYurophu ayipheli….
Noma ngabe uhamba ngempelasonto noma iholide ende eYurophu, ngaso sonke isikhathi kufanele wenze isikhathi sokuphumula. Ipikinikhi indlela emangalisayo yokuphumula nokuncoma amanye amasayithi nokubukwa kwesakhiwo. Ngakho, ukukusiza uqalise wakho…
Izinkundla zemigwaqo yaseYurophu nemigwaqo ebukekayo bekuyilungiselelo lezinganekwane ezimangalisayo izinkulungwane zeminyaka. Kuze kube namuhla iYurophu iyindawo ephumelela kuyo yonke indawo ephathini. Kuyi-mecca yamaqembu yabahambi abavela emhlabeni wonke njenge-bachelor ne-bachelorette…
Ukuhamba nokuthola izindawo ezintsha kusinika amaphiko okuphupha, funga, futhi ufunde. Emhlabeni omkhulu kangaka, cishe akunakwenzeka ukubona konke, futhi akunakwenzeka ukuzwa futhi ujabulele yonke indawo eYurophu. Nezindawo eziningi ezijabulisayo, kuphela…